फिक्री चोर हो - समाचार नियम
फिक्री चोर हो
के तपाईंले कहिल्यै अनुभव गरेका छन् चिन्ता? म बाहिर भन्न हिचकिचाउनु हुनेछ 100 वयस्क सर्वेक्षण, सबै 100 तपाईं बताउन हुनेछ तिनीहरूले फिक्री केही फारम अनुभव गरेका छन्.
फिक्री हाम्रो अस्तित्व को एक सामान्य भाग हो. मानिसको प्रारम्भिक वर्षहरूमा, चिन्ता र adrenalin आउँदै खतरा हामीलाई सचेत को उद्देश्य पूरा. यसले हामीलाई जीवित राखिएको. आज, कहिल्यै ती जिम्मेवारी हेरचाह गर्न दैनिक जिम्मेवारी र उपलब्ध समय मा कुनै वृद्धि वृद्धि गर्ने हामी धेरै महसुस कि फिक्री प्रतिक्रिया छ.
केही मानिसहरू, तथापि, फिक्री को एक दूर बदतर हालत अनुभव. फिक्री आक्रमण, वा आतंक आक्रमण, तिनीहरूले अक्सर उल्लेख गर्दै, सामान्यतया काम गर्न आफ्नो क्षमता खोस्न व्यक्तिहरूलाई.
डर आफ्नो मन seizes, सोच्न आफ्नो क्षमता स्तब्ध र प्रक्रिया स्पष्ट लाग्यो. तिनीहरू पनि कहिलेकाहीं सास फेर्न डर र कहिलेकाहीं सामान्य गर्न असमर्थ छौं.
यो एक debilitating अवस्था छ. डर र त्रास तपाईंलाई gripped कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ भइरहेको, बिन्दु गर्न तपाईं पनि किराना पसलमा एक सरल यात्रा पूरा सक्ने? यो धेरै वयस्क लागि एक दैनिक अवस्था छ.
सबैभन्दा ठूलो दुविधा को आतंक Stricken व्यक्तिगत द्वारा सामना अलग्गै धेरै महसूस छ, र नसक्नुको मदतको लागि कसैले बाहिर पुग्न. रोग को धेरै प्रकृति रोगी isolates, र उपचार विकल्प अवस्थित जस्तो बनाउँछ. उपचार खोजी उनीहरू को आराम क्षेत्र बाहिर अवस्थित थियो कि अर्थ राख्छ, वा आफ्नो बेडरूम.
अक्सर एक व्यक्ति कि गंभीर चिन्ता वा त्रास मा ल्याउन परिस्थिति अनुभव हुनेछ, र आतंक पैदा अवस्था एक पटक समाधान वा dissipate छन्, त्यसैले चिन्ता गर्छ. म आफ्नो सम्पूर्ण वयस्क जीवनको जान सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन, र बढ फिक्री केही फारम अनुभव कहिल्यै.
तपाईं जिम्मेवारी छ भने, बच्चाहरु, प्रियजनहरूलाई, र मित्र, त्यहाँ शायद भनेर गम्भीर चिन्ता अनुभव गर्न लगाउँछ अवस्थामा हुन जाँदै छ. केही मानिसहरू आक्रमण कहिल्यै अनुभव. तर धेरै गर्न, र ती मानिसहरूको लागि, यो एक क्षणिक कुरा हो. तर एक समय मा हरेक पटक, कसैले चिन्ता र त्रास अनुभव, र तिनीहरूलाई भित्र बढ्न थाल्छ.
यो आफ्नो जीवन खपत. यी मानिसहरू को लागि, सरल जिम्मेवारी डरलाग्दो परिस्थिति बन्न.
सुसमाचार, वास्तव मा मात्र उज्ज्वल ठाउँ म देख्न सक्नुहुन्छ, यो रोग मा, यो सर्त परामर्श संग सजिलै उपचार योग्य र मनन सहित आत्म-मद्दत प्रविधी को प्रयोग हो भन्ने छ, नम्र दबाइहरु, र जीवप्रतिक्रिया.
व्यक्तिगत बनाउनमा र तिनीहरूलाई आफ्नै उपचार मा भाग लिन अनुमति नै मा चिन्ता र त्रास रोक्न एउटा तरिका हो.
एक व्यक्ति महसुस गर्न थाल्छ एकपटक तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा नियन्त्रणमा छन्, फेरि, तपाईं पनि भारी चिन्ता र त्रास हटाउने उत्कट नजिक छन्.
आफ्नो दैनिक जीवनमा नियन्त्रण गर्न आफ्नो नसक्नुको मा व्यक्तिहरूलाई विश्वास द्वारा देखि यो रोग को शुरुवात worsened छ, नियन्त्रण reestablishing बिल्कुल आवश्यक छ.
35078	1 चिन्ता, फिक्री विकार, विकार, डर, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आतंक आक्रमण, लक्षण
← गुगल ग्लास बारे लोकप्रिय मिथक debunks नासा गरेको चन्द्र मिशन देखि क्यामेरा लिलामी मा बिक्री →